Magaalada Baledweyne ayaa lagu dilay sargaal ka tirsanaa ciidanka dawlada soomaaliya – STAR FM SOMALIA
Magaalada Baledweyne ee Gobolka Hiiraan waxaa maanta lagu dilay Sarkaal ka tirsan ciidamada Dowladda Federalka Somaliya, kaasi oo ka mid ahaa Saraakiishii dhex-dhexaadinta ka dhex waday maleeshiyo beeleedkii ku dagaalamay xaafadda Hawlwadaag ee Magaalada Baledweyne.
Saakay xaafadda Hawlwadaag ee Magaaladaasi waxaa ku baxay ciidamo ka tirsan Xooga dalka Somaliya iyo kuwa Amisom oo la kala dhex dhigay Beelihii ku dagaalamay halkaasi, waxaana wehliyay ciidanka Odayaasha Dhaqanka iyo Masuuliyiin ka tirsan Wafdigii tagay Magaalada Baledweyne iyo Maamulka Gobolka Hiiraan.
Iyadoo ay socoto kala dhex dhigida ciidanka Dowladda Maleeshiyaadka Xaafada Howlwadaag isku hor fadhiyay, ayaa mid ka mid ah Maleeshiyaadka wuxuu rasaas la dhacay Maxamed Mumiin Cirba Dheere, kaasi oo goobta ku geeriyooday.
Sarkaalkaan ayaa sida la sheegay hogaaminaayay qaar ka tirsan ciidanka Dowladda ee la geeyay xaafada Hawlwadaag, lamana oga sababta ka dambeysa dilka loo geystay.
Ciidamada Dowladda ayaa la sheegay inay soo qabteen ninkii maleeshiyaadka ka mid ahaa ee dilay Sarkaalka ka tirsan ciidamada Dowladda.
Xaaladda Magaalada Baledweyne ayaa ah mid degan, welina waxaa socota waan-waanta ku aadan sidii xal buuxa looga gaari lahaa dagaal soo noq noqday ee u dhaxeeya labadan maleeshiyo beeled.
Wafdi uu hogaaminaayo Wasiirka Amniga Gudaha iyo Madaxweynaha Mamulka Galmudug iyo Wasiiro kale ayaa ku sugan Magaalada Baledweyne, oo nabadda iyo dhex dhexaadin halkaasi ka wada.
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Somaliya Maxamed C/laahi Maxamed “Farmaajo” ayaa wuxuu ka hadlay Shirka Madasha Wadatashiga Qaran ee ka socda Magaalada Muqdisho